Xulashada Qaabka - AOOD Technology Limited
Waa maxay giraanta siibashada?
Giraanta silbashadu waa aalad korontada ku shaqaysa taas oo ay weheliso burushyo u oggolaanaya gudbinta awoodda iyo calaamadaha korantada ee taagan si ay u noqoto qaab wareegsan. Waxa kale oo loo yaqaan isku -xidhka korantada ee wareega, ururiyaha ama wareegga korantada, giraanta sibidhka waxaa loo adeegsan karaa nidaam kasta oo koronto -farsameeye ah oo u baahan xadid la'aan, kala -goyn ama wareeg joogto ah inta la gudbinayo awoodda, analogga, dijitaalka, ama calaamadaha RF iyo/ama xogta. Waxay hagaajin kartaa waxqabadka farsamada, fududeyn kartaa hawlgalka nidaamka waxayna tirtiri kartaa fiilooyinka u nugul waxyeellada ka soo laalaada kala-goysyada guurguura.
In kasta oo ujeeddada koowaad ee giraanta silbashadu ay tahay gudbinta calaamadaha korontada iyo korontada, cabbirka jirka, bay'ada hawlgalka, xawaaraha wareegga iyo caqabadaha dhaqaale ayaa inta badan saameeya nooca baakadaha ay tahay in la shaqaaleeyo.
Shuruudaha macaamilka iyo ujeeddooyinka kharashku waa qodobbo muhiim u ah wadista go'aannada horseed u ah samaynta naqshadaynta giraanta silsiladda oo guulaysata. Afarta qodob ee muhiimka ah waa:
Specifications Tilmaamaha korontada
Packaging baakadaha farsamada
Environment jawiga hawlgalka
Wareegyada siibashada waxaa loo isticmaalaa in lagu gudbiyo awoodda, analogga, calaamadaha RF iyo xogta iyada oo loo marayo halbeeg wareeg ah. Tirada wareegyada, noocyada calaamadaha, iyo shuruudaha ka -hortagga buuqa korantada ee nidaamka ayaa door muhiim ah ka qaata go'aaminta caqabadaha naqshadeynta jirka ee lagu soo rogay naqshadda giraanta silbiska. Wareegyada awoodda sare, tusaale ahaan, waxay u baahan yihiin waddooyin tabin oo waaweyn iyo kala -fogaansho weyn oo u dhexeeya waddooyinka si loo kordhiyo xoogga korontada. Wareegyada analogga iyo xogta, halka jir ahaan ka cidhiidhsan yihiin wareegyada korontada, sidoo kale waxay u baahan yihiin daryeel xagga naqshadahooda si loo yareeyo saamaynta wada-hadalka ama faragelinta u dhexeysa waddooyinka signalada. Xawaaraha hoose, codsiyada hadda hooseeya waxaa laga yaabaa in la adeegsado nidaamka xiriirinta buraash/dahab-dahab ah. Isku -darkaani wuxuu soo saaraa isku -habeynta baakadaha ugu yar sida ka muuqata AOOD siddooyinkii kaabsalkii kaabsal ahaa. Xawaaraha sare iyo baahiyaha hadda jira waxaa lagu daraa burushyada garaafyada ee qalinka iyo faraantiga lacagta ah. Kulamadani waxay caadi ahaan u baahan yihiin baaxado baakad oo waaweyn waxaana lagu muujiyaa hoosteeda iyada oo loo marayo siddooyinkii silsiladda. Adigoo adeegsanaya labada habba inta wareegyada giraanta siibku waxay muujiyaan isbeddellada iska -caabbinta xiriirka firfircoon ee qiyaastii 10 milliohms.
Tixgelinta baakadaha marka la samaynayo giraanta siibitaanka inta badan ma aha mid toos ah sida shuruudaha korontada. Naqshado farabadan oo farabadan ayaa u baahan xarig iyo mashiinka rakibidda ama warbaahinta si ay uga gudbaan giraanta siibashada. Shuruudahan ayaa inta badan qeexaya cabbirka dhexroorka gudaha cutubka. AOOD waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ka mid ah shirarka giraanta silsiladda. Naqshadaha kale waxay u baahan yihiin in giraanta siibashadu ay aad uga yar tahay barta dhex-dhexaadka ah, ama xagga sare. Xaaladaha kale, meesha bannaan ee loo heli karo giraanta silbashadu waa xaddidan tahay, oo u baahan in qaybaha giraanta simbiriirixa loo bixiyo si gooni ah, ama in giraanta siibitaanka lagu daro matoor, dareeraha booska, isku -xidhka wareegga fiber optic ama wadajirka wareega ee RF ee xirmo isku dhafan . Iyada oo ku saleysan tikniyoolajiyadda giraanta silsiladda ee casriga ah, AOOD waxay awood u siineysaa dhammaan shuruudahan adag waxaa lagu buuxin karaa hal nidaam giraanta silbashada oo dhammaystiran.
Jawiga loo baahan yahay in giraanta siibitaanku ku hoos shaqayso waxay saamayn ku leedahay naqshada giraanta siilka siyaabo badan. Xawaaraha wareegga, heerkulka, cadaadiska, huurka, naxdinta & gariirka iyo soo -gaadhista walxaha daxalka ah ayaa saamayn ku leh xulashada dhalista, xulashada maaddada dibedda, fuullada flange iyo xitaa xulashooyinka xargaha. Sida dhaqanka caadiga ah, AOOD waxay u isticmaashaa guryaha aluminiumka khafiifka ah giraanta silbarka ee la duubay. Guryaha biraha ka samaysan ayaa ka culus, laakiin waxaa lagama maarmaan u ah badda, biyaha hoostooda, daxalka iyo bay'ada kale ee qallafsan.
Sida Loo Sheego Giraanta Slip
Wareegyada siibitaanku had iyo jeer waxay ka mid yihiin farsamooyin waaweyn oo leh baahi loo qabo in laga gudbo awood koronto oo gaar ah iyo wareegyada signalada iyada oo loo marayo dusha wareegsan. Farsamada giraanta siibku waa qayb ka shaqaysa deegaan sida diyaarad ama nidaamka anteenada raadaarka. Sidaa darteed, si loo abuuro nashqad giraanta silsiladda ah oo ku guulaysan doonta codsigeeda saddex shuruudood waa in la buuxiyaa:
1. Qiyaasaha jirka, oo ay ku jiraan habaynta ku-xirnaanta iyo sifooyinka dib-u-rogidda
2. Sharaxaada wareegyada loo baahan yahay, oo ay ku jiraan ugu badnaan hadda iyo danab
3. Jawiga hawlgalka, oo ay ku jiraan heerkulka, huurka, shuruudaha ceeryaanta milixda, naxdinta, gariirka
Shuruudaha giraanta silsiladda oo faahfaahsan waxaa ka mid ah:
■ Iska caabbinta ugu badan ee u dhexeysa rotor iyo stator
■ Go'doon ka dhexeeya wareegyada
■ Go'doominta ilaha EMI ee ka baxsan guryaha giraanta siilka
■ Xuddunta bilawga iyo socodsiinta
■ Sharaxaadaha wareegga xogta
Astaamaha dheeraadka ah ee caadiga ah ee lagu dari karo kulanka giraanta siibashada waxaa ka mid ah:
■ Ururada wareega ee dareeraha ah
■ Ururada Rotax Coax
■ Kala -goysyada Rotary Fiber Optic
AOOD ayaa kaa caawin doonta inaad qeexdo baahidaada giraanta siilka oo aad u doorato qaabka ugu habboon shuruudahaaga naqshadeynta.